राजदूत शेर्पा दम्पती नै मानव तस्करीमा लागेकाे अाराेप , के हुन्छ अब ? | mulkhabar.com
राजदूत शेर्पा दम्पती नै मानव तस्करीमा लागेकाे अाराेप , के हुन्छ अब ?
December 3, 2018 | 8:03 am 106 Hits
अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा माथि ‘मानव तस्करी’को आरोप लागेपछि यथार्थ छानविन गरि दाेषी भएमा बर्खास्ती गर्नुपर्ने माग बढ्दाे छ ।
नेपाली राजदूतावास क्यानबारामा चालकको काम गरेका ओङ्छु शेर्पाले राजदूत लक्की र उनका पतिले विदेश पठाइ दिने भन्दै रकम असुल्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । राजदूत दम्पतीबाट आफू पीडित भएको शेर्पाले बताएका छन् ।
यस्तो छ ओङ्छु शेर्पाकाे अाराेप
लक्की राजदूत हुनु अघि नै ओङ्छु शेर्पा उनका पतिको सम्पर्कमा थिए । उनका पतिले अमेरिका पठाइदिने भन्दै २२ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। गाउँकै एक जनालाई अमेरिका पठाएकाले विश्वास २२ लाख रुपैयाँ दिएको पीडित ओङ्छु शेर्पाले बताएका छन् । त्यस पछि पनि १०–१० लाख गरेर २ पटक थप रकम दिइएको उनले बताए । अमेरिका पठाइदिने भन्दै पीडित शेर्पाले कूल ४२ लाख रुपैयाँ दिए ।
तर राजदूत दम्पतीले ओङ्छु शेर्पालाई अमेरिका पठाउन सकेनन् । उनले अमेरिकाको भिसाका लागी दर्खास्त दिएपनि उनको भिषा भने लागेन् र अमेरिका पठाउन नसकि रहेकै बेला लक्की शेर्पा राजदूत बन्ने चर्चा चल्यो ।
त्यसपछि ओङ्छु शेर्पालाई पनि दूतावासमै काम गराउने गरी अस्ट्रेलिया लैजाने सहमति भयो । त्यसपछि शेर्पाले दूतावासमै चालकको काम गरे । राजदूत भएपछि शेर्पाले चर्को रकम लिएर नेपालीलाई अस्ट्रेलिया पठाउने धन्दा शुरू गरेको ओङ्छु शेर्पाको आरोप छ ।
आफूले दिएको पैसा ओङ्छु शेर्पाले फिर्ता माग्न थालेपछि राजदूत दम्पतीले चोरीको आरोप लगाएको र शेर्पाकी पत्नीलाई मुद्दा लगाएर थुनामा पठाएको पीडित शेर्पाको दाबी छ । ओङ्छु शेर्पाकी पत्नी अहिले पनि प्रहरीको थुनामै रहेकी छन् । राजदूतको चक्करमा परेर ओङ्छु शेर्पा परिवार अहिले नराम्ररी फसेको तथा शक्ति र पैसाको आँडमा राजदूत दम्पतीले मनपरी गरि रहेको दाबी गरिएको छ ।
मानव तस्करीबाट आएको पैसाबाट राजदूत शेर्पाले काठमाडौंको नयाँपाटीमा दुई रोपनी जग्गा खरिद गरेको दाबी गरिएको छ । ओङ्छु शेर्पाले राजदूतले खरिद गरेको जग्गाको कागजपत्र र तिरेको पैसा आफूसँग रहेको बताएका छन् । ओङ्छुले उक्त घरको कम्पाउण्ड समेत निशुल्क बनाइ दिएका छन् ।
राजदूत शेर्पाले कारोबार आफू मार्फत् गर्ने गरेकालाई थप समस्यामा परेको ओङ्छु शेर्पाले बताएका छन् । ओङ्छु शेर्पामार्फत् सिंगापुरका तेम्वा शेर्पाका भाई दावा शेर्पालाई अस्ट्रेलिया लैजाने भनेर १४ लाख रुपियाँ राजदूत लक्की शेर्पाले लिएको दाबी गरिएको छ । राजदूत शेर्पाले ५–६ जनाबाट अस्ट्रेलिया लैजान रकम उठाएको आरोप छ ।
ओङ्छु शेर्पामार्फत् सिंगापुरका तेम्वा शेर्पाका भाई दावा शेर्पालाई अस्ट्रेलिया लैजाने भनेर १४ लाख रुपियाँ राजदूत लक्की शेर्पाले लिएको दाबी गरिएको छ । राजदूत शेर्पाले ५–६ जनाबाट अस्ट्रेलिया लैजान रकम उठाएको आरोप छ । शेर्पा सन् २०१७ मा राजदूतावासमा चालकको रुपमा काम गर्न पुगेका थिए । राजदूत लक्की शेर्पासँग आर्थिक विषयमा तनाव भएपछि ओङ्छु शेर्पाले क्यानबाराको नेपाली राजदूतावास छाडेका उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा ठगी गरेको अभियोगमा राजदूत लक्की शेर्पाले ओङ्छु शेर्पाकी पत्नीलाई छ महिनादेखि जेलमा थुनाएर राखेकी छिन् ।
राजदूतलाई बर्खास्त गर्न माग
विवादमा आएपछि राजदूत शेर्पालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेतालाई प्रभावमा पारेर राजदूत बन्न सफल भएकी शेर्पालाई बर्खास्त गर्न नेकपाकै नेताले माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस लेख्दै नेकपाका केन्द्रिय सदस्य विष्णु रिजालले बर्खास्त गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि उनकै सहयोगीले मानव तस्करी जस्तो संगीन आरोप लगाएका छन् । कुटनीतिक क्षेत्रसँग पूर्णतः असम्बन्धित उनलाई त के मतलब तर यस घटनाले देशलाई कुटनीतिक बृत्तमा लज्जित बनाएको छ । उनलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विगतमा विवादमा आउनासाथ विश्व प्रधान, माया शर्मा, हमिद अन्सारी लगायत बर्खास्त भएको इतिहास सरकारले सम्झोस्’
पूर्वमा ओवादीका विदेश विभाग सचिव युवराज चौलागाईले समेत सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस लेख्दै राजदूतका कामले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको शीर झुकेको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘राजदूत मुलुकको दूत हो । नेपालका एक राजदूतका बारेमा मानव तस्करीको संगीन आरोप लागेको छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु मुलुकको शीर झुकेको छ । नेकपाको समेत सिफारिसमा त्यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेको व्यक्तिबाट त्यसखालको आपत्तिजनक काम भएको सुन्दा हामी लज्जित भएका छौं । नेकपा र नेपाल सरकारले यस परिघटनालाई अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक लिई छानबिन गर्नुपर्छ र पदको दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्नु पर्दछ ।
दुतावासले के भन्याे ?
अस्ट्रेलियाको नेपाली राजदूतावासले अाराेपकाे खण्डन गर्दै यसाे भनेकाे छ – ‘आङ्छु शेर्पाले अस्ट्रेलियामा लुकिछिपी बसेर सम्मानित अदालतलाई प्रभावित पार्न र व्यक्तिगत छवि धमिल्याउने उद्देश्यले अत्यन्त भ्रामक, मनगढन्ते, कपोकल्पित रुपमा लगाइएको आरोप मिथ्या, तथ्यहीन र आधारहीन छ ।,
तसर्थ, उक्त टेलिभिजन कार्यक्रममा निजले लगाएको झुठा आरोपको सम्बन्धमा विश्वास नगर्न, कुनै पनि भ्रममा नपर्न र सत्यतथ्य अबिलम्ब आउने हुनाले त्यतिन्जेलसम्म धैर्य राख्न हुन समेत यसै विज्ञप्तिमार्फत् सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। दूतावासले झण्डै १ वर्ष अघि काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै आङ्छु शेर्पामाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको उल्लेख गरेकाे छ ।
चालकबाट छाडेको र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको १ वर्षपछि शेर्पाले राजदूतमाथि आरोप लगाएका छन् । दूतावासका काउन्सेलर राजेन्द्र पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन महाशाखामा पत्राचार गर्दै शेर्पाले गरगहना लगायत बहुमूल्य सामान साथमा लिई सम्पर्कविहीन भएकाले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन इन्टरपोलसँग समन्वयका लागि आग्रह गरिएकाेे पाण्डेले बताएका छन् ।